Kitra – “Glo Caf Awards 2018”: hatao any Sénégal ny fizarana ny amboara | NewsMada
Kitra – “Glo Caf Awards 2018”: hatao any Sénégal ny fizarana ny amboara
Par Taratra sur 24/07/2018
Nitsidika ny filoham-pirenena senegaley, i Macky Sall, ao amin’ny lapam-panjakana ao Dakar, ny alakamisy 19 jolay lasa teo, i Ahmad, filohan’ny kaonfederasiona afrikanina baolina kitra (Caf). Fantatra, tamin’ny dinika nifanaovan’ny roa tonta, fa homena an’i Sénégal ny fampiantranoana ny “Glo Caf Awards 2018” na ny fanolorana ny “ballon d’or” ho an’ny mpilalao baolina kitra afrikanina mendrika, ho an’ity taona ity.
Nanambara ny fahavononany handray izany ny filoha Macky Sall, izay hotontosaina ny 8 janoary 2019. Marihina fa tany Accra, Ghana, ny nanaovana izany tamin’ny taon-dasa ary nandrombaka ny amboara ilay Egyptianina, i Mohamed Salah, milalao ao amin’ny Liverpool, Angletera.
Anisan’ny tsara toerana hiady izany koa, amin’ity, ilay Senegaley, i Sadio Mané, milalao ao amin’ny Liverpool, ihany koa izay fanirian’ny vahoaka senegaley ny hahazoany izany, amin’ity. Noresahin’ny filoha roa tonta koa ireo lohahevitra maro ny amin’ny nanatontosana ny fiadiana ny ho tompondaka eran-tany, natao tany Rosia farany teo, sy ny zava-bitan’ireo ekipa dimy nisolo tena an’i Afrika.
Farany, nanamafy ny fahafaliany ny amin’ny fananganana ny ivontoeram-piofanana ao Guéréo, 80 km miala ao Dakar, i Ahmad, amin’ny hahazoan’i Sénégal manofana ireo tanora sy mpitsara ary ireo ao anatin’ny tontolon’ny baolina kitra.